Kuzophenywa ngothishanhloko osolwa ngokushaya abafundi | News24
Kuzophenywa ngothishanhloko osolwa ngokushaya abafundi
isithombe: lethiwe makhanyaIsikole uMsimude lapho kusolwa khona uthishanhloko ngokushaya abafundi.
UMNYANGO wezeMfundo esifundazweni saKwaZulu-Natal uthi uzothumela ithimba elizophenya ngokushaywa kwabafundi esikoleni samabanga aphakeme iMsimude Secondary School endaweni yase-Sweetwaters.
Lokhu kuvezwe ilowo okhulumela lo mnyango uMnu Muzi Mahlambi ngoLwesibili.
Lokhu kulandela ukusabalala kwe-video kathishanhloko uMnu Sbusiso Hlela ezinkundleni zokuxhumana eshaya izingane zakulesi sikole nokusolwa ukuthi bezishayelwa ukuthi zifike esikoleni sekwedlule isikhathi.
UMnu Mahlambi uthe uma ngabe kuza odabeni lokushaywa kwezingane esikoleni abanawo umthetho nje kuphela owehlulela noma ngubani owenzayo.
“Sizothumela iziphathimandla zomnyango ukuba ziye esikoleni ziye kohlola ziqinisekise ukuthi kungabe loku okubonakala kwi-video kuyiqiniso yini.
“Uma ngabe kutholakala ukuthi konke okubonakala kwi-video[kuyiqiniso] angeke size sichithe sikhathi ukuthatha izinyathelo zokuqondisa izigwegwe,” kubeka yena.
Ngokuthola kwe-Echo le-video ishuthwe emasontweni amabili edlule ishuthwa omunye wabafundi.
Ngemuva kokusabalala kwale-video abafundi bavuke umbhejazane bavala amasango kulesi sikoleni ngesonto eledlule bethi abasamfuni uthishanhloko ngoba uyabashaya ekubeni kuthiwa abasafundi abasavumelekile ukuthi bashaywe.
Abafundi abakhulume ne-Echo kodwa bangathanda ukudalulwa amagama abo bathe bateleke ngoba sebekhathele ukushaywa.
“Uthishomkhulu uyena osibhaxabulayo ngepayipi ingako sithi asisamfuni. Ukushaya ngithi uyophuza amanzi okanye uthi uya endlini encane. Uvele akutshele ukuthi uma sekuke kwakhala insimbi akukho muntu ozophuma.
“Sekuyisikhathi eside esishaya sesikhathele manje. Kumanje akekho esikoleni ngemuva kwesiteleka sethu,” kusho okunye umfundi.
Omunye umfundi uthe ngemuva kokusabalala kwe-video kukekwaba khona izingxoxo mayelana nokushaywa kwezingane kodwa besingakakabi khona isixazululo.
“Kumanje siyesaba ngoba sizwe kuthiwa uthishomkhulu uzobuya kulelisonto. Asazi ukuthi uma ngabe ebuya uzokwenza njani hlampe uzosishaya sonke,”kuphetha omunye mfundi.
Omunye umzali uthe bakhathazekile ngento eyenzeka esikoleni.
“ Asihambisani neze nje nokuthi izingane zethu zishaywe ikakhulukazi ngepayipi. Asisho ukuthi azingajeziswa uma ngabe kukhona ezikonile kodwa ukushaywa ngepayipi akuyona into esihambisana nayo. Sifuna umnyango ululandelele lolu daba ngoba phela siyazi ukuthi izingane azivumelekile ukushaywa ezikoleni,” kubeka yena.